प्रभावितलाई हाईड्रोको ६ लाख कित्ता आईपीओ, कस्ले कसरी गर्ने खरिद ? | Arthatantra.com
प्रभावितलाई हाईड्रोको ६ लाख कित्ता आईपीओ, कस्ले कसरी गर्ने खरिद ?
काठमाडौ । कालिका पावर कम्पनीले ६ करोड मुल्यको ६ लाख कित्ता आईपिओ बिक्रि गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित गोरखा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई लागि साधारण सेयर (आइपीओ) बिक्री गर्न शुक्रबार धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरको ६ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो ।
कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । आइपीओ जारी गर्न कम्पनीले काठमाडौं क्यापिटल मार्केट र ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई संयुक्त रुपमा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । कालिका पावरले गोरखा जिल्लामा ६ मेगावाटको दरौंदी ‘ए’ साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
६० करोड रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहेको कालिका पावरले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित बासीन्दालाई ६ करोडको साधारण सेयर जारी पश्चात दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई गरी २० प्रतिशत अर्थात १२ करोडको १२ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्नेछ । कम्पनीमा ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको छ ।